‘कृषिमा वैदेशिक लगानी कुनै पनि हालतमा आउन दिंदैनौं’ - अरनिको राजभण्डारी
जनतापाटी शुक्रबार, पुस २४, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । सरकारले केही दिन अगाडि कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउने निर्णय गरेपछि अधिकांश सरोकारवालाहरुले त्यसको कडा विरोध गरेका छन् । विरोधको केन्द्रमा छन्–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा दूग्ध व्यवसायी अरनिको राजभण्डारी । अहिलेको समयमा नेपालको कृषिमा कुनै पनि हालतमा वैदेशिक लगानी भित्रिनु हुदैन भन्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका राजभण्डारीसंग गरिएको कुराकानीको सार-
कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रयाउने सरकारी घोषणा प्रति तपाईहरुले कडा आपत्ति जनाइ रहनु भएको छ, अब के हुन्छ ?
-केही हुंदैन । सरकारी घोषणा कार्यान्यवयन हुंदैन । त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्रमा एफडिआई आउंदैन ।
सरकारले नै आउनुस्, लगानी गर्नुस भनेर विदेशीलाई भनिसकेपछि तपाईहरुले भनेर मात्र त हुंदैन होला नी ?
-सरकारले भन्दैमा हुन्छ ? काम गर्नको लागि सरकार मात्रै सहयोगी निकाय हो ? जनताको साथ चांहिदैन ? कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अरु संघ संस्थाहरुको चांहिदैन ? नेपालमा २,४ जना व्यक्ति वाहेक कसैले पनि कृषिमा वैदेशिक लगानी हुनुपर्छ भनेको छैन । सबै मान्छेले विरोध गरिरहेका छन् । तपाईले अहिलेसम्मका कुनै कृषि मन्त्रीले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको देख्नु भएको छ ? कृषि मन्त्री भैसकेका रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्राईदेखि घनश्याम भुषालसम्मका नेताहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गर्नु भएको छ । विज्ञहरुले विरोध गरेका छन्, किसानले विरोध गरेका छन् भने यस्तो अवस्थामा कुन देशको वैदेशिक लगानी आउंछ ? सरकारले खुला गरे पनि वैदेशिक लगानी आउंदैन ।
तपाईले २,४ जना वाहेक सबैजना विरोधमा छन् भन्नु भयो, ती २,४ जना चांही को हुन् ?
-मैले नाम किन भनिरहनु पर्छ र सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नी । राजनीतिक पार्टीका केही ‘क्याडर’हरु स्वार्थवस यो निर्णयको छन् । तिनीहरुको स्वार्थ के हो थाहा हुंदै जाला, तर यो निर्णयको पछाडि केही थोरै मानिसहरुको स्वार्थ मात्रै गांसिएको छ ।
केही ठूला व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेका छन्, तपाईले तिनीहरुलाई नै भन्न खोज्नु भएको हो ?
-मैले आनन्द वगारियाको प्रतिकृया हेरें, पवन गोल्यानको प्रतिकृया पनि हेरें । उहांहरुको भनाई नेपालीले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्रै वैदेशिक लगानी ल्याउं, नेपालीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा नल्याउं भन्नु भएको छ । हामीले भनेको पनि त्यही हो । नेपालको समग्र कृषिको अवस्था विश्लेषण गरेर, यहांको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर जुन क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सक्दैनौं, त्यो क्षेत्रमा मात्रै ससर्त वैदेशि लगानी भित्रयाउने निर्णय गर्दा के फरक पर्छ ? तर, यहां त छलफल नै नगरि, किसान, व्यवसायी, विज्ञहरु कसैलाई थाहै नदिइ, राजनीतिक अनिश्चय भएको बेलामा २,४ जनाको स्वार्थपूर्तीको लागि सुटुक्क यस्तो निर्णय गरिनु नेपाली किसान र उद्यमीलाई मार्ने कुरा मात्रै हो । त्यसैले यो निर्णय राष्ट्रघाती छ । यसले किसान र कृषि क्षेत्र डुबाउने छ ।
अमुललाई ल्याउने खेल हो ?
-झट्ट हेर्दा त त्यही देखिएको छ । अन्यथा विगतमा ल्याउने प्रयास हुंदा विरोध पछि रोकिएको थियो । अहिले प्रतिनिधि सभा भंग भएर राजनीतिक क्षेत्र अस्थिर रहेको बेला सरोकारवाला कसैसंग पनि छलफल नै हतार हतार किन ल्याउनु पर्यो ?
हामी वैदेशिक लगानीको विरोधि होइनौं । तर, देशका किसानको संरक्षण गर्ने सरकारी दायित्व हो कि होइन ? सरकारले त्यो दायित्व पुरा गरेको छ ? सरकारले अलिकति सहयोग गर्ने हो भने नेपालमै अमुलभन्दा शसक्त बलिया कम्पनीहरु बन्छन् । सरकारी सहयोग नपाउंदा पनि किसानले उत्पादन त गरिरहेका छन नी । सरकारले त्यस्ता किसानलाई सहयोग गर्ने हो कि एफडिआईको नाममा विदेशी ठूला कम्पनी भित्रयाएर नेपाली किसानको घांटी अठ्याईदिने हो ?
हामीले कति पटक अनुरोध गर्यौं । ‘कन्टयाक्ट फार्मिङ’ सम्वन्धि कानुन ल्याउं, ‘कन्टयाक्ट फार्मिङ’लाई प्रोत्साहित गरौं । त्यति गर्ने हो भने कृषिका अहिलेका कतिपय समस्या समाधान हुन्छ । लगानीको समस्या पनि रहंदैन । त्यसले नपुगे बल्ल वैदेशि लगानीको कुरा गरौंला भनेर हामीले बर्षाैदेखि भन्दै आइरहेका छौं । सरकारले यसबारेमा हाम्रो कुरै सुनेको छैन । ‘कन्टयाक्ट फार्मिङ’को बारेमा कुरै नसुन्ने तर सुटुक्क वैदेशिक लगानी खुला गर्नुले नै यो किन ल्याइयो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
अहिलेकै अवस्थामा सरकारले तपाईहरुको कुरा सुन्ने संभावना देखिदैन, अब के गर्नुहुन्छ ?
-हामीले गर्न सक्ने जति सबै गर्छाैं । त्यसै छोड्ने त कुरै हुंदैन ।
सडकमा जानुहुन्छ ?
-अन्तिम विकल्प त सडक नै हो नी । तर, हामी सडकलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र प्रयोग गर्छाैं । त्यो भन्दा अगाडि सरोकारवालाहरुसंग छलफलदेखि कानुनी उपचारसम्मका विधिहरु प्रयोग गर्छौं ।
भारतमा महिनौंदेखि किसानहरु आन्दोलनमा छन् । तर पनि सहमति भएको छैन । सरकारले कुरा नसुनेपछि तपाईहरु पनि त्यसैगरि महिनौं आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
-हामी कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन दिंदैनौं । त्यो रोक्नको लागि के के गर्नु पर्छ । सबै गर्छाैं । अहिलेलाई म यत्ति मात्रै भन्छु ।
८५ अर्ब लगानी र १५ लाख रोजगारी गुम्ने भन्दै साना उद्यमीको विराेध, ठूला उद्यमी समर्थनमा
सरकारको जनविरोधी निर्णयमा उद्योगीहरुको आपत्ति
माओवादी केन्द्र प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला जनकपुरमा, प्रचण्ड सहभागी ३१ मिनेट पहिले
फेवाताल मिच्नेहरु चैनले सुत्न पाउँदैनन् - देवकोटा ५८ मिनेट पहिले